ကမ္ဘာကျော် ရွှေတြိဂံနယ်မြေသို့ တစ်ခေါက်
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှ ချင်းရိုင်မြို့သို့ စာရေးသူသွားရောက်လေ့လာခဲ့၍ နေ့ လယ်ပိုင်းတွင် ချင်းရိုင်မှ တစ်နာရီခန့်ကားဖြင့်သွားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့်လာအို နိုင်ငံတို့ဆုံရာ ကမ္ဘာကျော်ရွှေတြိဂံနယ်မြေသို့ ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေတြိဂံနယ်မြေ၏ သုံးနိုင်ငံဆုံရာ ချင်းရိုင်ပြည်နယ် Sop Ruak ဒေသသို့ ကားဖြင့်သွားလျှင် Chiang Saen ရှေးဟောင်း မြို့မှ ၁၅ မိနစ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ မယ်ဆိုင် မြို့မှလည်း ၄၅ မိနစ်အကြာတွင် ရောက်ပါသည်။ တရုတ်ပြည်မှ စတင်စီးဆင်းလာသည့် မဲခေါင်မြစ်ကြီးနှင့် Ruak မြစ်တို့ဆုံရာတွင် သုံးနိုင်ငံဆက်စပ်နေ၍ မဲခေါင်မြစ်၏အရှေ့ ဘက်တွင် လာအို၊ မဲခေါင်မြစ်၏အနောက်ဘက် Ruak မြစ်၏မြောက်ဘက်တွင် မြန်မာ နှင့် မဲခေါင်မြစ်၏အနောက်ဘက် Ruak မြစ်၏တောင်ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တည်ရှိ သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းတွင် Golden Triangle မုခ်ဦးများ၊ မြေပုံများ၊ အထိမ်း အမှတ်ကျောက်တိုင်များ၊ ပြခန်းများဖြင့် စနစ်တကျပြသထား၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူး နေကြသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များဖြင့် စည်ကားနေသည်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါသည်။
ယခင်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဓိကဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာ ဒေသများအဖြစ် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရန်၊ ပါကစ္စတန်တို့ပါဝင်သည့် ရွှေလခြမ်း(Golden Crescent) နယ် မြေ(အဓိကအားဖြင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ)နှင့် မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအိုတို့ဆုံရာ ရွှေတြိဂံ (Golden Triangle)နယ်မြေတို့ ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင်မူ တောတောင် ထူထပ်၍ ၃၆၇၀၀၀ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းသည့် ရွှေတြိဂံနယ်မြေကြီး၌ ဘိန်းစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းသွားပြီး အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး၊ အပန်းဖြေရေးလုပ်ငန်းများထွန်းကားလာပြီး အဓိကအားဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း များ အထူးဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။
မဲခေါင်မြစ်အတွင်း စက်လှေဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီသည်များအား လိုက်လံပြသရာ ရှေးဦးစွာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်ဆိပ်ကမ်းအနီးတွင် ဧရာမလှေကြီးပုံစံပေါ်၌ တည်ထားသော ရွှေရောင်ဝင်းနေသည့် ထိုင်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်ကြီးကို ကြည်ညိုဖွယ်ရာလှမ်းမျှော်ဖူးတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် မြစ်၏မြောက်ဘက်ကို ဆန်တက်ရာ အနောက်ဘက်တွင် လူသူနေထိုင်ခြင်းမရှိသည့် မြန်မာပိုင်ကျွန်းငယ်ကို တွေ့မြင် ေကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာဘက်ခြမ်းရှိ Paradise Resort အပန်းဖြေ အဆောက်အအုံကို ခမ်းနားစွာ တွေ့မြင်ရ၍ ယင်း၌ ထိုင်းနိုင်ငံမှ လာရောက်ကာ Casino လုပ်ငန်း ဖွင့်လှစ်ထား၍ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဧည့်သည်များ သွားရောက်ကြကြောင်း သိရပါသည်။ ယင်းနောက် စက်လှေ ကိုပြန်ကွေ့ပြီး မြစ်ကြောင်း အတိုင်းစုန်ဆင်းရာ အရှေ့ဘက်ခြမ်း လာအိုနိုင်ငံတွင် တရုတ် နိုင်ငံမှ လာရောက်၍ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဖွင့်လှစ်ကာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် နေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ထိုင်းဆိပ်ကမ်းနေရာ ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် မြစ်အောက်ဘက်ရှိ လာအိုနိုင်ငံပိုင် Don Sao ကျွန်းငယ်ပေါ်သို့ တက်ရောက် ေလေ့လာခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုကျွန်းပေါ်တွင် ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဈေးဆိုင် အများအပြားတွေ့မြင်ရ၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသူအချို့ကို လည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ယင်းနောက် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကို ပြန်လာခဲ့ပြီး အစီအစဉ် အရ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မယ်ဆိုင်မြို့ကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်က တာချီလိတ် မြို့မှတစ်ဆင့် မယ်ဆိုင်မြို့သို့ ရောက်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုအကြိမ်၌မူ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ နယ်စပ်ချောင်းကူးတံတားထိပ်နေရာမှ အခြားကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ နှင့်အတူ မြန်မာ နိုင်ငံဘက်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း မိတ်ဆွေများကို အမိနိုင်ငံအား ညွှန်ပြခဲ့မိပါသည်။ အချိန်မရသဖြင့် နယ်စပ်ဂိတ်များကိုဖြတ်ကျော်ပြီး တာချီလိတ်မြို့သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ ခြင်းမရှိပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် မယ်ဆိုင် မြို့ရှိ ဈေးဆိုင်ကြီးများမှာ ယခင်အတိုင်းစည်ကားလျက်ရှိသကဲ့သို့ ချင်းရိုင်၊ မယ်ဆိုင်နှင့် ရွှေ ကြိဂံနယ် မြေ၌လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ လွန်စွာထွန်းကားအောင်မြင်လျက် ရှိသည်ကို ထင်ထင်ရှား ရှားမြင်တွေ့သိရှိခဲ့ရပါတော့သည်။
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်များရှိရာ သာယာလှပသည့် နီပေါနိုင်ငံ
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်များရှိရာ အရပ်ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် ဟိမဝန္တာတောင် တန်းများတည်ရှိရာ နီပေါနိုင်ငံကို မြင်ယောင်ကြမိမှာပါ။ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင် (သို့ မဟုတ်) အမြင့် ပေ ၈၈၄၈ မီတာ (၂၉၀၂၈ ပေ)ရှိသည့် ဧ၀ရက်တောင်အပြင် ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးတောင် ၁၀ လုံးအနက် ရှစ်လုံးမှာ နီပေါနိုင်ငံတွင်တည်ရှိပါသည်။ နီပေါနိုင်ငံ သည် တောင်အာရှတွင်တည်ရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေသော ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၂၆ ဒသမ ၄ သန်း ခန့် နေထိုင်လျက်ရှိ၍ ရေခဲများလွှမ်းနေသည့်တောင်တန်းများဖြင့် အေးချမ်းသာယာ လှပသော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ နီပေါနိုင်ငံ၏မြို့တော် ခတ္တမန္တူနှင့် ရန်ကုန်သို့ အပတ်စဉ်သောကြာနေ့ တိုင်း Himalaya Airlines ဖြင့် တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းပြေးဆွဲလျက်ရှိရာသွား လာရေးများစွာလွယ်ကူသွားပါသည်။Himalaya Airlines နှင့် Nepal Tourism Board တို့၏ဖိတ်ကြားချက်အရ Himalaya Airlines ၏ ရန်ကုန် GSA လက်မှတ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော UA Ticketing ဦးဆောင်သည့် မြန်မာမီဒီယာနှင့် အွန်လိုင်း Travel Blogger များအဖွဲ့သည် နီပေါနိုင်ငံသို့ မတ်လ ၁၇ ရက်မှ မတ်လ ၂၄ ရက်ထိ တစ်ပတ်လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ကြသည်။
နီပေါနိုင်ငံ၏မြို့တော် ခတ္တမန္တူတွင် လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၄ သန်းနေထိုင်လျက်ရှိပြီး ခတ္တမန္တူချိုင့်ဝှမ်း၌မူ လူပေါင်း ၅ သန်းကျော်နေထိုင်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ပေ ၄၆၀၀ အမြင့်တွင်တည်ရှိသော ခတ္တမန္တူမြို့တွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အ ဆောက်အအုံများ၊ ရှေးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၊ ရာဇဝင်သမိုင်းများနှင့် ပြည့်နေ သည်။ နီပေါနိုင်ငံတွင် ဟိန္ဒူဘာသာကို အဓိကကိုးကွယ်ပြီး ကိုးကွယ်သူ ပေါင်းမှာ ၈၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာ ဒုတိယကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်။ တရုတ် နိုင်ငံတိဘက်ဒေသနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ လည်း နေထိုင်ကြသည်။ ခတ္တမန္တူမြို့တွင်တည်ရှိသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓပုထိုးတော် များ၌ တစ်ဆူဖြစ်သော ဗုဒ္ဓနတ်(Budhanath)စေတီဝင်းတွင် တိဘက်များအနေများ သောကြောင့် ထိုနေရာကို Little Tibet ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓနတ်စေတီကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် UNESCO က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓနတ်နှင့်အတူ ဆွေယံဘူနတ်(Swayambhunath)ကို UNESCO World Heritage Site အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ဆွေယံဘူနတ်ဘုရားကျောင်းသည် လည်း တိဘက်တွင်တည်ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီများပုံစံနှင့်ဆင်တူပြီး တောင်ကုန်း ပေါ်တွင်တည်ရှိရာ ခန္တမတ္တူတစ်မြို့လုံးကို တောင်ပေါ်မှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အရှေ့ဘက် မှတက်လျှင် လှေကားပေါင်း ၃၆၅ ဆင့်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပြီး တောင်ဘက်မှဆိုလျှင် ကား ဖြင့် တောင်ထိပ်တက်၍ရမည်ဖြစ်သည်။ သဘာ၀အတိုင်း မပြုပြင်ဘဲထားသောကြောင့် မျောက်များ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး Monkey Temple ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ခတ္တမန္တူရောက် လျှင်မသွားမဖြစ်သွားသည့်နေရာမှာ ပရှူးပသိနတ်(Pashupatinath) ဘုရားကျောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားကျောင်းမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တိုင်း ဘ၀မှာ တစ်ကြိမ်ရောက်သင့်သည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များအထွတ်အမြတ်ထားရာနေရာဖြစ် သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ သေဆုံးသည့်အခါ အလောင်းများကို ထိုဘုရားကျောင်းဘေး က ဘက်မာတီ(Bagmati)မြစ်ကမ်းတွင် မီးသင်္ဂြိုလ်လေ့ရှိပြီး ပြာများကို မြစ်ထဲမျှောချ လေ့ရှိသည်။ ထို့ပြင် ခတ္တမန္တူချိုင့်ဝှမ်းမြို့များတွင် ရင်ပြင်(Durbur Square)များရှိကြ သည်။ စာရေးသူတို့အဖွဲ့သည် Kathmandu Durbur Square နှင့် ခတ္တမန္တူမှ တစ် နာရီခွဲလောက် မောင်းရသည့် Bhaktapur Durbur Square သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ သည်။ Kathmandu Durbur Squareတွင် တစ်ခါတစ်ရံကုမ္မာရီနှုတ်ဆက်သည် ကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကုမ္မာရီဆိုသည်မှာ ရွေးချယ်၍ အလေးအမြတ်ထားကြသည့် သက်ရှိထင်ရှား နတ်ဘုရားမဖြစ်သည်။ နီပေါနိုင်ငံတွင်မြို့တော်ပြီးလျှင် ဒုတိယအသွားများဆုံးမြို့မှာ အနာပူနာတောင် တန်းများဝန်းရံနေသည့် ပိုခါရာ(Pokhara)မြို့ဖြစ်သည်။ ပိုခါရာမြို့တွင် နာမည်ကြီး တောင်တက်ပြတိုက် International Mountain Museun? Davis Fall၊ Dလေငျ Fall ရေတံခွန်၊ နေထွက်ချိန်ကြည့်ရာ ဆာရန်ကော့တောင်(Sarangkot)၊ Phewa ရေကန်နှင့် အခြား လည်ပတ်စရာများစွာရှိပါတယ်။ ပိုခါရာမြို့သည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Adventure မြို့ဖြစ်သည်။ Trekking နှင့် Hiking တို့လုပ်နိုင်သည်သာမက ရေခဲ တောင်တွေဆီအနီးကပ်ကြည့်၍ရသည့် Mountain Flight? Ultra Flight တို့ လည်းစီးလို့ရသည်။ ထိုမျှမက လေပေါ်တွင် ပျံဝဲကာလေဟုန်စီးနိုင်သော ဏမေaglငိငညါ လည်းလုပ်နိုင်သည်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဖွားမြင်ရာ လုမ္ဗနီဥယျာဉ်သည်လည်း နီပေါနိုင်ငံ၏ အ နောက်တောင်ဘက်အခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။ လုမ္ဗနီဥယျာဉ်တွင် မြတ်စွာဘုရားမွေးဖွား ရာနေရာ၊ အင်ကြင်းပင်၊ မယ်တော်မာယာမီးဖွားခါနီး ကိုယ်လက်သန့်စင်ရာ၊ မီးဖွားပြီး သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားကို ဆေးကြောရာ ရေအိုင်၊ အသောကမင်းကြီးတည်ထားခဲ့သည့် ကျောက်စာတိုင်၊ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ဘုန်းကြီးကျောင်းများ လည်းတည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘုရာဖူးများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဂယာမှတစ်ဆင့် ကားလမ်းဖြင့် နီပေါနိုင်ငံ၏ လုမ္ဗနီဥယျာဉ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။
ခန္တမတ္တူမြို့မှ နှစ်နာရီဝန်းကျင်မောင်းလျှင်ရောက်သော ချန်ဒရာဂီရိတောင်၏ တောင်ထိပ်သည်လည်း တောတောင်ရှုခင်းကြည့်ရန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။ တောင်ထိပ်သို့ ကြိုးဆွဲရထား(Cable Car)ဖြင့်တက်ရပြီး ထိုကြိုးဆွဲရထားကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်နေဝင်နေထွက်ကြည့်၍လှသော တောင်ပေါ် အပန်းဖြေမြို့လေးသည် နာဂါကော့မြို့ဖြစ်ပြီး မြို့တော်မှ တစ်နာရီကားမောင်းလျှင် ရောက်သည်။ ချစ်ဝန်ဆိုသည့်မြို့တွင်လည်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို ဘေးမဲ့ထိန်း သိမ်းထားသည့် Chitwon National Park ရှိသည်။ နီပေါနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သေးသော်လည်း ရေမြေတောတောင်သဘာ၀တရားများဖြင့် လွန်စွာသာယာလှပသည့်နိုင်ငံပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။
အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့်အတူ စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်လာသည့် ရှန်းကျန့်
ရှန်းကျန့်မြို့၌ ရှန်ဟိုင်းနှင့်စင်ကာပူတို့ပြီးလျှင် ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံးကွန်တိန် နာဆိပ်ကမ်းကြီးလည်းရှိ၍ Shenzhen Stock Exchange သည်လည်း အလွန် ထင်ရှားလှသည်။ မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများနှင့် ခေတ်မီအဆင့်မြင့်အဆောက်အအုံအများအပြားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည့် ရှန်းကျန့်မြို့၏စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းမှာ ဟောင် ကောင်နှင့်တန်းတူဖြစ်နေသဖြင့် ၎င်းကို ''တရုတ်ပြည်မကြီး၏ ဟောင်ကောင်''ဟု လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိကြသည်။ ရှန်းကျန့်နှင့်ဟောင်ကောင်မြို့တို့အကြား ဖြတ်သန်းသွားလာနေသည့်ဝင်ပေါက်(Check Point) ၉ ခုရှိ၍ ၆ ခုမှာ ကုန်းမြေချင်း ဆက်စပ်နေပြီး ၃ ခုမှာရေကြောင်းလမ်းမှဖြစ်ကာ နေ့စဉ်ယင်းတို့အကြား ကားစီးရေ ၃၀၀၀၀ ခန့် ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ရှန်းကျန့်မြို့၌ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ရှိ၍ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် မြေအောက်ရထားလမ်းစတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ရာ ယခုအခါ လိုင်းပေါင်းများစွာပြေးဆွဲလျက်ရှိပြီး တည်ဆောက်ဆဲမြေအောက်ရထား လမ်းများလည်းရှိသည်။ မြို့အနီး၌ စက်ရုံအလုပ်ရုံအများအပြားအပြင် နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများလည်းရှိရာ တာ့ယာ့ပင်လယ်အော်ရှိ Daya Bay Nuclear Power Station နှစ်ခုသည် ထင်ရှားပါသည်။
မြို့မြောက်ပိုင်းရှိ သာယာလှပသည့် လင်ဟွားရှန် (Lianhuashan)ဥယျာဉ်တွင် ပေ ၅၀၀ နီးပါးမြင့်သည့် တောင်ကုန်းငယ်လေးရှိပြီး ယင်း၏ထိပ် ၌ ရှန်းကျန့်မြို့အပါအ ဝင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၏ လမ်းညွှန်ဗိသုကာဖြစ်သည့် ခေါင်းဆောင်ကြီးတိန့်ရှောင်ဖိန်၏ ရုပ်တုကြီးတည်ရှိ၍ ယင်း၏ရှေ့ ၌ အမှတ်တရ ဓာတ် ပုံရိုက်ကူးနေသူအများအပြားကို စာရေးသူမြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထို့ပြင် မြို့လယ်ရှိ ရှန်း ကျန့်ပြတိုက်၌လည်း တိန့်ရှောင်ဖိန်၏ရုပ်တုနှင့် သူစီးခဲ့သည့်ကားကို ဂုဏ်ယူစွာပြသ ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုမျှသာမက မြို့လယ်ရှိ Shennan ရိပ်သာ၌လည်း တိန့် ရှောင်ဖိန်၏ဧရာမပိုစတာကြီးနှင့်အတူ ရင်ပြင်တစ်ခုဖန်တီးထားကြောင်းလည်း သိရ သည်။ ရှန်းကျန့်မြို့၌ ကမ္ဘာကျော်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဗဟိုဌာနချုပ်များ (ဥပမာ-Huawei)၊ ပြတိုက်ကြီးများ၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းဌာနချုပ်များ၊ အားကစားကွင်းနှင့် ရုံကြီးများ၊ မြန် နှုန်းမြင့်ရထားများပြေးဆွဲရပ်နားလျက်ရှိသည့် အဆင့်မြင့်ဘူတာရုံကြီးများ ရှိသည့် အပြင် ရေအောက်ကမ္ဘာအဏ္ဏဝါပြတိုက်၊ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်၊ Disney World, Dis-ney Land တို့ကဲ့သို့ Happy Valley အပန်းဖြေဥယျာဉ်စသည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီး သည်များလေ့လာနိုင်သည့် နေရာအများအပြားလည်းရှိပါသည်။ ယင်းတို့အနက် ကမ္ဘာ အနှံ့ရှိ နိုင်ငံအသီးသီး၏ထင်ရှားသည့် အဆောက်အအုံများကို ပုံတူစုစည်းတည် ဆောက်ပြသထားသည့် Windows of World ဥယျာဉ် ကြီးသည် အလွန်ထင်ရှား၍ ယင်းသို့ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသည် အများအပြားလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့ရှိကြသည်။ ထိုနေရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားလှသည့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံတူကို တည်ဆောက်ပြသထားသည်ကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ကျယ်ဝန်းလှသည့် တရုတ် နိုင်ငံအနှံ့ရှိ ပြည်နယ်အသီးသီးမှထင်ရှားသည့် အထိမ်းအမှတ်၊ အဆောက်အအုံ ပုံစံတူများကို စုစည်းတည်ဆောက်ပြသထားသည့် Splendid China အပန်းဖြေ ဥယျာဉ်ကြီးသည်လည်း ရှန်းကျန့်မြို့၏အဓိကလေ့လာစရာနေရာ တစ်ခုဖြစ်သည်။
တံငါရွာလေးမှ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီး တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့သည့် ရှန်းကျန့်မြို့မှာ ယခုတိုင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိရာ ယင်းကို လေး၊ ငါးကြိမ်ခန့်ရောက်ခဲ့ဖူးသော်လည်း စာရေးသူအနေဖြင့် အတုယူ စရာ၊ ကြည့်ရှုလေ့လာစရာများမှာ မကုန်နိုင်လောက်အောင်ပင် ဖြစ်နေရပါတော့သည်။
အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်လာသည့် ရှင်းကျန့်
ယခုအခါ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးနှင့် ချမ်းသာကြွယ်၀မှု၊ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု အများဆုံးမြို့ကြီးငါးမြို့တွင်အပါအဝင်ဖြစ်၍ ပေကျင်း၊ ရှန်ဟိုင်းနှင့် ကွမ်ကျိုးမြို့တို့ပြီးလျှင် စတုတ္ထလိုက်သည့် ရှန်းကျန့်(အချို့ကလည်း ရှင်းကျင့်ဟု အသံ ထွက်သည်) (Shenzhen)မြို့ကြီးသည် များမကြာမီကာလက တံငါရွာလေးတစ်ရွာ သာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကွမ်တုံပြည်နယ်၏ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သည့် ရှန်းကျန့်မြို့သည် ကွမ်တုံပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စီး ဆင်းသည့် ပုလဲ(Pearl)မြစ်၀တွင် ဟောင်ကောင်မြို့အနီး၌ တည်ရှိပါသည်။ ယခင်က ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တံငါရွာလေးသာဖြစ်ခဲ့၍ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် လူ ၃၀၀၀၀ နေထိုင် သည့်မြို့ငယ်မှ မြို့ကြီးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်က တရုတ်နိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖိန် (Deng Xiaoping)၏ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုနှင့် မှန်ကန် သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှစ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် တံခါးဖွင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်တို့ကို ပီပြင်စွာစတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုး ပမ်းခဲ့ကြပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်ပြည်၏ပထမဆုံးအထူးစီးပွားရေးဇုန်(Special Economic Zone)ကို ရှန်းကျန့်မြို့၌ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံရပ်ခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူ ထိုအထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့်အခြားဇုန်များလည်း အသီးသီးလျင်မြန်စွာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည်လည်း တစ်ဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ရာ ယခုအခါကမ္ဘာပေါ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျော်တက် တော့မည့် ကမ္ဘာ့ဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရှန်းကျန့်မြို့သည်လည်း စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာတို့တွင် တစ်ဟုန်ထိုးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာခဲ့ရာ ယခုအခါ အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဦးရေ ၁၉ သန်းကျော်ရှိသည့် စီးပွားရေး မြို့တော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယင်းဦးရေအနက် ဒေသခံမှာအနည်းငယ်သာဖြစ်၍ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက အခြားဒေသမှလာရောက်အခြေချနေထိုင်ကာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သဖြင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးစုံနှင့်စကားပြောပုံစံမျိုးစုံကို စာရေးသူမြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာသည့် ယင်းမြို့သည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှင့် ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်၌ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးမြို့များတွင် အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်ကျွန်း၏ နယ်မြေသစ်များဖြစ်သည့် ကုန်းတွင်းဒေသကောင်းလုံကျွန်းဆွယ်နှင့် ရေလက်ကြားလေးတစ်ခုသာခြားသည့် ရှန်းကျန့် မြို့သည် ဟောင်ကောင်နှင့်အပြိုင်တိုးတက်လာခဲ့၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် GDP (Gross Domestic Product) ထုတ်ကုန်ပမာဏစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂၉၄ ဘီလျံ(၁ ဘီလျံ = သန်း ၁၀၀၀) ရှိပြီး ယင်းပမာဏမှာ တရုတ်တစ်နိုင်ငံလုံး GDP ၏ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံနီးပါးရှိကာ ပေါ်တူဂီ၊ အိုင် ယာလန်၊ ဗီယက်နမ်စသည့်နိုင်ငံများ၏တစ်နိုင်ငံစီထုတ်လုပ်သည့် GDP ပမာဏထက် ပိုများကြောင်း သိရသည်။ အထူးသဖြင့် ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း လွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ရာ နှစ်စဉ် GDP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်အမည် Shum Chun မှ Shenzhen ဟု ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး နောက် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တစ်နေ့လျှင် အထပ်မြင့်တိုက်တစ်လုံးနှုန်းစတင်တည်ဆောက်၍ ဆောက် လက်စတိုက်များကိုလည်း သုံးရက်လျှင် တစ်လွှာ(တစ်ထပ်)နှုန်းဖြင့် ပြီးစီးအောင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး သုံးရက်လျှင်မြို့ တွင်းလမ်းမကျယ်တစ်လမ်းနှုန်းဖောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ မီတာ ၂၀၀ (၆၅၆ ပေ)ထက်မြင့်သည့် မိုးမျှော်တိုက် ၆၀ ခန့်နှင့် မီတာ ၃၀၀ (၉၈၄ ပေ)ထက်မြင့်သည့် မိုးမျှော်တိုက် ၁၀ လုံးခန့်ရှိသည့် မဟာမြို့တော် (Mega City)တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့ရာ ၁၁၅ ထပ်ရှိ၍ ၁၉၆၉ ပေမြင့်သည့် Ping An ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန၊ အထပ် ၁၀၀ နှင့် ပေ ၁၄၅၀ ခန့်မြင့်သည့် Kingkey 100 ကုန် သွယ်မှုအဆောက်အအုံနှင့် ၁၂၆၀ ပေမြင့်သည့် Diwang အဆောက်အအုံတို့မှာ ထင်ရှားသည့် အဆောက်အအုံများဖြစ်ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ရှေးဟောင်းမြို့တော် အများအပြားရှိ၍ ယခုအခါ ယင်းတို့သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလျက်ရှိရာ ဂျင်ဂျိုးမြို့ (Jingzhou) သည်လည်း အပါအဝင်ဖြစ် သည်။ Hubei ပြည်နယ်၏ တောင်ပိုင်း၊ ဝူဟမ်မြို့အနီး အနောက်ဘက်တွင်ရှိသော ဂျင်ဂျိုးမြို့သည် ကမ္ဘာကျော် ယန်စီမြစ် (Yangtze) မြစ်ကမ်းနံဘေး၌ တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော်က စတင်၍ထင်ရှားခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် ရှေး ဟောင်းမြို့ဖြစ်၍ ယခုအခါစီရင်စုနယ်မြို့တော်တစ်မြို့လည်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၄၁၁ နှစ်အကြာ မင်းပေါင်း ၂၀ စိုးစံခဲ့သည့် ချူ (Chu) နိုင်ငံငယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့၍ ချူ ယဉ်ကျေးမှုအထူးထွန်းကားရာဒေသ မြို့လည်းဖြစ်သည်။ တောတောင်များဝန်းရံလျက် မြို့တွင်း၌ ဥယျာဉ်များနှင့် ရေကန် ၃၀ ကျော်ရှိပြီး စိမ်းစိုသာယာလှပသဖြင့် Eco-Garden City (ဥယျာဉ်မြို့တော်) အဖြစ် ထင်ရှားသည်။ လူ ၇ သန်းနီးပါး နေထိုင် သည့် ယင်းမြို့သို့သာမက အနီးရှိ မြစ်ကျဉ်းသုံးခုဆုံရာ၌ တည်ဆောက်ထားသည့် ရေကာတာကြီး (Three Gorges်) နှင့် ယခင်က တည်ရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံငယ်သုံးခု (Three Kingdoms) လေ့လာခရီးများသို့ လာရောက်ကြသည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပခရီး သည်များဖြင့်လည်း စည်ကားလှသည်။ အထူးသဖြင့် မြစ်ကမ်းနံဘေး ဥယျာဉ်အတွင်း ရှိ ပေ ၁၉၀ မြင့်သော တရုတ်စစ်သူကြီး Guan Yu ရုပ်တုကြီးနှင့် အောက်ခြေရှိပြတိုက် သို့ လူအများအပြားလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလျက်ရှိသည်ကို စာရေးသူ မြင်တွေ့ခဲ့ ရပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ၁၈၀၀ ခန့်က ဟန်မင်းဆက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် စစ်သူကြီးဖြစ်၍ ၎င်း၏ သစ္စာရှိမှု၊ တာဝန်ကျေပွန်မှု၊ သတ္တိရှိမှုနှင့် တရားနည်းလမ်းကျ မှုတို့ကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ ၁၃၂၀ တန်လေးသည့် ကွန်ကရစ်ရုပ်တုကြီးပေါ် တွင် ကြေးပြားပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် ဖုံးအုပ်တပ်ဆင်ထားသည့် ဧရာမရုပ်တုကြီး၏ပုံမှာ တရားနည်း လမ်းကျမှု၊ သမာဓိရှိမှုတို့ကို ဖော်ညွှန်းသည့် တရုတ်စာလုံးပုံစံနှင့် ဆင်တူ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဂျင်ဂျိုးမြို့ရှိ ဂျင်ဂျိုးပြတိုက်တွင် ပိုးထည်၊ ကျောက်စိမ်း၊ ယွန်း၊ ကြေး၊ ဆင်စွယ် စသည်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ၁၂၀၀၀၀ ကျော်ကို ပြသထား၍ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦး၏အလောင်းကိုလည်း မပုပ်မသိုးအောင် စီမံပြသထားပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၃၀၀ ကျော်က မြို့ရိုး ဟောင်းကို လက်ရှိမြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ၁၆၄၆ ခုနှစ်တွင် ပြုပြင်တည်ဆောက်ထား သည့် ဂျင်ဂျိုးမြို့ရိုးသည်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါသည်။ အောက်ခြေ၌ ၃၃ ပေကျယ်၍ ပေ ၃၀ မြင့်သည့် မြို့ရိုးသည် ၇ မိုင်ခန့်ရှည်ပြီး မျှော်စင်တစ်ခုစီရှိသောရှေး ဟောင်းမုခ်၀ကြီးခြောက်ခုရှိပါသည်။ မြို့ရိုးအပြင်ဘက်တွင် ကျုံးလည်းရှိ၍ ရှေးဟောင်း မြို့အတွင်းမှ ခေတ်သစ်မြို့ပြမြင်ကွင်းကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ရှုရသည်မှာ လွန်စွာစက္ခုပ သာဒဖြစ်ရပါသည်။ ထို့အပြင် မြစ်ကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ထွန်းကား ၍ Yanka Port ၌ ကွန်တိန်နာကြီးများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအများအပြားကို မြစ်ကြောင်း အတိုင်းပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ချူလူမျိုးတို့၏ ယဉ် ကျေးမှုလက်ရာများကို စုစည်းဖော်ပြထားသည့် ဂျင်ဂျိုးမြို့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဌာန၊ Three Kingdoms ခေတ်ကတည်ထားခဲ့သည့် Longevity Pagoda စေတီတော်၊ သက်ကြီးပင်ပု (Bonsai) ဥယျာဉ်နှင့် သမင်ကောင်ရေ ၁၀၀၀ ခန့်ရှိသည့် သဘာ၀ ဘေးမဲ့ဥယျာဉ်တို့မှာ ဂျင်ဂျိုးမြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် လေ့လာစရာများပင်ဖြစ်ကြ သည်။ ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်သည့်အပြင် ခေတ်မီမြို့ပြအဆောက်အအုံများဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာနေပြီး လေ့လာစရာများ များပြားလျက်ရှိရာ ဂျင်ဂျိုးမြို့သို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ပြည်တွင်းခရီးသည် ၂၆ သန်း နှင့် ပြည်ပခရီးသည် လေးသိန်းကျော်လာရောက်ခဲ့ကြ သည်ဟု မှတ်တမ်းများ၌ ဖော်ပြထားခြင်းမှာ စာရေးသူ၏ အမြင်အရ လွန်စွာဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပြီး အမှန်ပင်သွားရောက်လေ့လာစရာ မြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်သည်ဟု စာရေးသူ ညွှန်း ဆိုချင်ပါတော့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အီတလီ (သို့) ခေါင်းရိုင်
ထိုင်ချွန်း သို့မဟုတ် ထိုင်ဝမ်၏ တတိယမြို့တော်
အီဂျစ်တို့၏ အသက်သွေးကြော ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးနိုင်းမြစ်ပေါ်သို့